एक छिन त नमज्जाले झस्केँ – NEPÆNGLISH
एक छिन त नमज्जाले झस्केँ
आज पनि सदा झैं पाठशालाको केहि गृहकार्य गर्नु बसेको थिएँ, तर एक पटक नेपालको समाचारहरू अन्लाईनमा गई थाहा नगरेसम्म चित्तै नबुझ्ने । त्यसैले हरेक दिन जसो मैले हेर्ने गरेका साइटहरू खोलेँ । मलाई माइ संसार डट कम् मनपर्ने मध्येमा एउटा पर्छ । यसो के खोलेको, ठ्याक्कै नेपालकै शैलीमा बनाएका घरहरूको तस्बिर देखेँ । काठमाडौंको त पक्कै होईन भन्ने त मलाई शुरुदेखिनै लागेकै हो । दुई लाईन मात्र के पढेको, मुटु ढुक्-ढुक गरि जोडले बढेर आयो । सो पोस्टका लेखकले त्यो फोटो छिमेकी राष्ट्र चीन, सांघाइमा खिचेको फोटो हो भन्दा त मनै कुँडेर आयो । अब त यो उत्तरी छिमेकीले पनि हाम्रो जस्तो शहर बनाएर अलि-अलि भए पनि नेपाल आउने गरेका पर्यटकहरू आफ्नो देशमा लाने भो भन्ने ठूलो विस्मात भयो ।
यो विस्मात अहिलेको अवस्थामा लाग्नु पनि स्वभाविकै हो । हाम्रा दक्षिणी छिमेकीको हेपाहा प्रवृतिले गर्दा पनि हो । चीनसँग लडाईं हारेर हिन्दुस्तान फर्कँदा कालापानी भएर फर्केकाहरू अहिले हाम्रो कालापानीको ३०००० हेक्टर जमिन उसको बाऊको सम्पत्ती व उसको आमाले बिहेमा दाईजो ल्याएको खेतझैँ गरि कब्जा जमाएर बसेकाछन् । नेपालीले आफ्नो भूमिमा पाइला टेक्न पाएका छैन । अझ हुँदा-हुँदा, दुरुस्त नेपालकै कपिलवस्तुजस्तै देखिने गरि त्यसको २०-२५ किलोमिटर मात्र पर त्यस्तै कपिलवस्तु बनाएर काम सिध्याइसके । आफूलाई बौद्धमार्गी, अझ बुद्धका चेला भनि बौध बिहारमा जीवन बिताउने एक भिक्षुसमेत झुट प्रचार गर्दैगरेको हामी यहाँ भिडियोमा देख्न सक्छौं । यो छिमेकी अरु देशका सबै कुरालाई नक्कल गर्ने अब्बल कलाकार भएको देश हो भन्ने त थाहा थियो, तर यसरी नक्कली लुम्बिनी बनाउला भन्ने चाहिँ कहिले लागेको थिएन । तर बनायो ! बुद्ध हिन्दुस्तानमा जन्मेको भनेर सारा संचार माध्यमहरूले ढोल पिटिराखेको छ । यहाँ विदेशमा पनि प्राय: अहिलेसम्म मैले हात पारेका पुस्तकहरूमा बुद्धलाई हिन्दुस्तानी नै बनाइदिएको छ । कुरा यहाँ कुनै व्यक्तीलाई नेपाली वा भारतीय भनेर दावी गर्नुमा पर्ने ठूलो राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा हो । उदित नारायण झा, मनिषा कोइराला, वा हिन्दुस्तानमा मजदुरी वा काम गर्ने एउटा नेपालीलाई ऊ हिन्दुस्तानी भनेर दावी गरेको जस्तो होईन यो विषय । म बौद्धमार्गी होईन र पनि मलाई यसको ठुलो सरोकार छ । बुद्धमाथि राष्त्रियताको दावी गर्नु भनेको हाम्रो देशको माटोमा सिधा हवाला दिनु हो । यो एउटा खुल्लारूपमा सानो देश भनेर लल्कारेको हो ।
पहिलो कुरा, कुनै राष्ट्रको नागरिकलाई कसैले जबर्जस्ती आफ्नो बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । बुद्धलाई भारतिय बनाउँदा, उनिसँग नाम जोडिएका सम्पूर्ण कुरा भारतिय हुन जान्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । कुनै देशको राष्ट्रिय विभूती वा ऐतिहासिक व्यक्तीहरूलाई छिमेकी देशले आफ्नो देशको नागरिक भनि दावी गर्छ भने, यो कुरालाई कुतनैतिक रूपमा कसरी हेर्ने र बुझ्ने ? बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी हो भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उसले बुद्ध हिन्दुस्तानी हो भनि भन्छ भने, यसको तात्पर्य के हुन सक्छ ? यो कुन स्वार्थले अभिप्रेरित भएर यस्ता अफवाहका कुरा विश्वसामु राख्न खोज्छ ? के हाम्रो माटोमाथिको उसको अनधिक्रित दावी होईन र ? हाम्रो नेपाली स्वाभिमानमाथि गरिएको सुनियोजित प्रहार होईन र ?
त्यसरी हामीलाई हेप्नेले उत्तरी छिमेकीलाई पनि एकचोटि झिज्याउन मात्र खोजोस्, उसको गति उहिले सिक्कीमपारीको नाकामा लडेको लडाईंको हालत हुन्छ । अनि हामीलाई भने निहुँ खोज्छ ! सक्छौ भने, चाइनासँग सिमाना जोडिएको सिमाक्षेत्रमा आफ्नो दावी गरोस् । हाम्रो माटोमा गिड्डे आँखा गाडेको होइन, खाली बुद्धलाई हिन्दुस्तानी बनाएर देशको नामै कमाउन खोजेको हो भने, अहिलेका नाम चलेका लिओ मेस्सि, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, काका, माइकल फेलिप्स्, टाइगर उड्स् अझ उनिहरूकै कति चलचित्रमा खेलिसकेका अमेरिकी कलाकारहरू र रेस्लरहरूलाई पनि उनिहरूकै नागरिक हो भनि छापाहरूमा र टिविहरूमा फुकोस् । छ आँट ?
आइन्स्टाइन र हिट्लर पनि उनिहरूकहाँ जन्मेर उनिहरू सानो हुँदै जर्मनिमा बसाइ सरेको भन्नु पनि अति उपयुक्त होला । विल गेत्स्, वारेन बफेट पनि भारतिय मूलका हुन् भनेर दावी गर्दा पनि हुन्छ । बेलायती औपनिवेशिककालमा भारतिय महिलाहरू गोराहरूसँग लागेर उनिहरूबाटै मिसिएको रगतबाट जन्मिएकाहरू हुन भन्दा पनि हुनेथियो । सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल आदि ग्रीक सभ्यताका दार्शनिकहरूले पनि हिन्दुस्तानको हिमान्चल प्रदेशमा आएर दर्शन र तर्क गर्ने शिक्षा हासिल गरेको भने पनि हुन्थ्यो होला । गहिरो सोचमा मग्न भएर तर्क गर्नेहरू अल्छी मानेर योगाश्रम छोडी उनिहरूकै देशमा फर्के । यसो भन्दा हिन्दुस्तानी बाबा र मातेहरू, अनि रामदेवजस्ताको पनि गरिमा अझ उचो हुने थियो होला । कति हिन्दू देवि-देवताहरूका पौराणिक कथासँग मिल्ने ग्रीक र रोमी देवताहरू छन्, तिनीहरू पनि कसो दावी गरेनछ । देशकै नाम कमाउने भए, शैक्षिक पाठ्यक्रममा झुटो कुरा राखेर संसारलाई झुट नै बाड्ने हो भने, यस्ता अरु धेरै कुरा दावी गर्ने कुराहरू छन् । तर आखिरमा नेपालकै विभूती र नेपालकै भूमीमाथि किन यस्तो नाङ्गो हस्तक्षेप ? किन नेपालको सार्वभौमिकतामा दिनदहादै बलात्कार ?
अनि माइ संसारमा यी नेपाली कला-कृती झल्किने घर र सानो शहर नै देख्दा अगुल्टोले हिर्काएको कुकुर बिजुली चम्किदा तर्सिन्छ भने जस्तै गरि झस्किने त अवश्य नै भैहाल्यो नी । यी तस्बिरमा देखिएका घरहरू सांघाइ एक्स्पो २०१० मा हाम्रो नेपालको तर्फबाट प्रदर्शनिमा राखिएको पाविलिएन – एक किसिमका नमुना घरहरू – हुन् । धन्न, हिन्दुस्तानले जस्तो नक्कली कपिलबस्तु बनाएर अरुको भूमिनै दावी गर्न मिल्ने खाले बनाएको होईन रहेछ ।
नक्कली कपिलवस्तु निर्माणको भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
फोटो साभार: माइ संसार र सांघाइ व्यापार महोत्सब २०१०
Satya Maharjan April 23, 2010 Mixed Bag
Previous Previous post: Was the Tomb Really Empty?
Next Next post: Hope is Found…